Lambarrada macquulka ah inuu midkood u xirto Kooxda Manchester United saxiixooda cusub ee Odion Ighalo – Gool FM
(Manchester) 01 Feb 2020. Odion Ighalo ayaa laga yaabaa inuu kulankiisii ugu horreyay u safto Man United marka kooxda Ole Gunnar Solskjaer ay u safraan Chelsea kulanka Premier League 17-ka bishan Febraayo.
Kooxaha Manchester United iyo Shanghai Shenhua ayaa si rasmi ah u shaaciyay in xiddiga heerka caalami ee dalka Nigeria uu u dhaqaaqay garoonka Old Trafford.
Si kastaba ha noqotee, waxaa si weyn loo hadal hayaa in 30-sano jirkaasi uu ogolaaday inuu si amaah ah ugu dhaqaaqo Man United inta ka hartay xilli cyaareedkan 2019-20.
Weeraryahanka ayaa dhaliyay 16 gool oo Premier League ah intii uu joogay Watford, halka uu shabaqa soo taabtay 10 jeer 19 kulan oo uu u saftay kooxdiisa haatan tartammada oo dhan.
Ighalo ayaa maalmaha soo socda ku sii jeeda Kooxda Manchester United, taasoo la micno ah inuusan ciyaari doonin kulanka galabta ay la ciyaarayaan Wolverhampton Wanderers.
Yeekeede, xiddiga dhaawan galka ah ee Bruno Fernandes waxaa gacanta loo geliyey lambarka 18-aad kaddib bixitaankii Ashley Young, waxaana jira tiro badan oo lambarro ah oo uu xiran karo saxiixa cusub ee Man Utd, Ighalo.
Lambarka 11-aad ayaa ah mid uu xiran karo Ighalo kaddib markii uu Martial iska dhigay xagaagii hore, waxa kale oo jirta suurto-galnnimada in Ighalo uu qaadan karo lambarka 19-aad, lambarka 25-aad ama lambarka 27-aad ee kooxda reer England.
Waxaa la sii saadalinayaa in xiddiga reer Nigeria uu xiran doono lambarka 11-aad, waxaana ay Ighalo u noqon doontaa wax weyn haddii uu ku ciyaaro lambarkii uu caanka ku ahaa halyeygii Man United ee Ryan Giggs.
RASMI: Xiddiga ku guuleystay abaal-marinta laacibka bisha Janaayo ee Kooxda Manchester United oo lagu dhawaaqay